सस्तो भएर आयो रोयल इन्फिल्डको बुलेट बाइक, ३५० सिसिको १ लाख २७ हजार मात्र ! – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
सस्तो भएर आयो रोयल इन्फिल्डको बुलेट बाइक, ३५० सिसिको १ लाख २७ हजार मात्र !
सो बाइकको मूल्य क्रमशः १ लाख १२ हजार र १ लाख २७ हजार भारु रहेको छ । स्ट्यान्डर्ड मोडलको तुलनामा नयाँ बाइक लगभग ९ हजार सस्तो रहेको छ । स्ट्यान्डर्ड रोयल इन्फिल्ड बुलेट ३५० को मूल्य १ लाख २१ हजार र स्ट्यान्डर्ड ३५० ईएसको मूल्य १ लाख ३६ हजार भारु रहेको छ । साभार।